Blockchain Digital Kuzivikanwa: Zviri Kufambira mberi Zvakakwana? - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji, Uncategorized
Blockchain Dhijitari Kuzivikanwa: Iko Kufambira Mberi Zvakaringana?
chibatiso, kuchengetedzwa, kuvanzika, uye nyore kushandisa ruzivo uye data zviri pakati pekunetseka munyika inofambiswa nedata. Zvisinei nekuti urikukurukura nezvekushandiswa kweruzivo irworwo mukutsinhana kwemari, nezveutano, yekushambadzira data, traffic, hurumende, dziviriro, logistics, kana kungoita zvakajairika zvekupedzisira-mushandisi zvinoshandiswa, semuenzaniso, kuchengetedza rako pachako data rekuchengetedza.
Zviri sei Blockchain kukanganisa Dhijitari Kuzivikanwa?
Icho chakanyanya kukosha kuti unzwisise iyi nyaya nezvikonzero zvakajeka. Uyezve, ndeipi nzira iri nani yatingave takakwanisa kuve nayo nekuwanika kwe Blockchain nhasi.
The blockchain hunyanzvi hunogona kutarisira uye kusimbisa kuzivikanwa kwemushandisi uye zvitupa nenzira yakavandudzwa, yakachengeteka.
Ida zvaunoverenga? Wobva wabata chidimbu chitsva chemukati iko pano.
Chii chinonzi Blockchains?
The blockchain zita rinopa chirevo chinotaridzika pakuona mashandiro anoita tekinoroji. Blockchains ndeyemamberi madhijitari anoshandisa cryptography (yeiyi mamiriro ezvinhu nzira yekuona dhijitari dhata kuburikidza nekunyorera) kune cache mabhureki eruzivo ayo akateedzana zvakasungwa pamwe chete kuburikidza neanenge masystem akaparadzirwa kutenderera pasirese. Dzokororo dzakachengetwa pamhepo, zvichiita kuti zvive zvakaoma kumiririra data.
Kunyange hurumende dzese (kana dzinoverengeka) dzakazivisa mhando dzehunhu, dhijitari, uye kuzivikanwa pamhepo, idzi hadzioni miganho yenyika. Zvekare, kubata izvi zvitupa nguva zhinji kunoda kuvimbwa, nyanzvi dzehunyanzvi uye ruzivo rwunoiswa nechepakati, izvo zvinokwidza mutengo wekuchengetedza dhata pamwe nekuvhura iro ruzivo kune mumwe munhu wese anokwanisa kuwana epakati server nzvimbo. Iko kushoma kana kushomeka kudzora kwe data zvine chekuita nemushandisi wekupedzisira.
Blockchain inobatsira mukugadzira uye kutonga kwedhijitari ID inochengetwa pane yakasarudzika komputa system. Kwete chete yaizokwanisa kushandiswa senge chinangwa chekusimbisa pasi rose, inogona kushandiswa pasi rose. Mapuratifomu, uye kunyanya kuchengetedza data rako pachako.
Uyewo Verenga: Nei Blockchain ichawedzera muna 2018
Blockchain inogona kubvisa Scam here?
Vazhinji vatsigiri ve blockchain hutsva hunoratidza kuti hunogona kubvisa hutsotsi. Kunyange zvazvo zviri pamutemo izvozvo blockchain inoita kuti zviome zvinonetsa kune ma hackers kukanganisa nedata rako, haina kuvimbika. With blockchain, chero nguva yaunoita shanduko yedata kana kubhadhara iwe unogona kuteedzera data rekuchinjana. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kutsvaga nzvimbo yekupedzisira yemari yakabiwa, semuenzaniso.
Dambudziko nderekuti kugona kwako kutevedzera kutengeserana kwaizovhara kana mari yachinjwa kuva mari yenyama. Saka, nguva blockchain tekinoroji inoita kuti hoax iwedzere kunetsa haipindike pakutyorwa. Mazuva ano hacker kurwiswa pane akasiyana wallet online anoratidza blockchain iri pachinangwa chinochiva chematsotsi.
Blockchain mabhizimisi matsva ari kuongorora zvakanyanya kuderedzwa Data management hurongwa ne, dzimwe nguva, kushanda pamwe nehunyanzvi, manejimendi manejimendi, uye masangano ehurumende kudzikamisa njodzi dzekukura kwecyber-kurwiswa uye kunyepedzera kwekuzivikanwa. Ivo vari zvakare kutsvaga nzira dzekupa vanhu, kusanganisira vasina kuchengetedzwa, kuwana manejimendi inoda humbowo hwekuzivikanwa uye ivo vakagadzirira kuita zvakanyanya kushanda kupfuura zvazvino ziva nzira dzako dzevatengi.
Izvo zvataurwa, blockchain inopa shanduko dzechokwadi maererano nekugona kwayo kutonga. Kana iwe wagadzirira kugovera uye kutungamira kuti ndeupi ruzivo rwekunze rwunogona kusvika, unogona kubata nekuvanzika kwako online uye kuvapo zvakanyanya zvakakwana.
Uyewo Verenga: 8 Inozivikanwa blockchain Consensus Mechanism
Chii chinonzi Kuzvimirira-Changamire nekuBlockchain?
Blockchain ine zvinhu zvinoita kuti uzivikanwe. Panzvimbo pekunamira shanduko yemari chaiyo, zvinogoneka kuisa chitupa data muleja. Chiono chekuwedzera ndechekuti a blockchain inogona kunge yakavharirwa referensi yekusimbisa dhata yega pasina kuburitsa ruzivo rwechokwadi kune sevhisi co-op.
Vatengi vaizove nebasa ravo rekuzivikanwa data, zano rinotorwa sekuzvimirira-kuzvitonga. Izvo zvinodzikisira mukana wekuti ruzivo rwunoputika rungazodonhedze ruzivo rwavo kwese kwese pawebhu.
Fungidzira chokwadi chaunenge uri mukutonga kwe data rako pachako; kuvepo kwaunogona kucheka-kubvisa uye kudzikisira kuti ingani data raunogovana uchibata kugona kuuraya munyika. Iyi iID yekuzvitonga, uye yatove pano. The blockchain ingori hutsva hutsva hunojekesa nzira yekuzvitonga pachayo kuburikidza nehurongwa hwakaganhurwa. Inovimbisa kuvimba uye kuvanzika, uko kuchinjana kwakachengeteka, kwakasimbiswa uye kunogoneka uye kunotsigirwa nenhengo dzinoshanda, dzakatenderwa.
Chokwadi, isu tava kukwanisa kucherechedza masangano nehurumende dzichitanga kuvaka nekushandisa masisitimu aya kutarisira chinodiwa chevagari uye nekupa vimbiso yekuzvimiririra.
Uyewo Verenga: Kukwira kweBlockchain seSevhisi (BaaS)
Kusununguka kwekushandisa kweVatengi
Pasinei nekuti iyo bhizimisi nyaya dzakapoteredza blockchain kuvimba kunogadziriswa, kune kwenguva refu yekuwana manejimendi nyaya idzo blockchain hainzwisise, semuenzaniso, manejimendi akakosha.
Vanhu vanofanirwa kuratidza kuti vanoti identity data vachishandisa imwe siginicha yekombuta yakavanzika, ingave yakachengetwa nemagetsi kana kuisirwa muID. Hurumende dzakawanda kubva pari zvino dzakabudirira kuve nemacomputer eID zvirongwa zvinoita izvi. Zvisinei, kushandisa a blockchain kuchengeta data hakunyatso kuita kuti manejimendi aya aite kushomeka.
Pangave nemamiriro ezvinhu akawandisa apo iwe ungangoda maneja kuti adzokere kumashure kuchinjanisa kana kubvumidza mukana kune mumwe munhu akazvichengeta kubva kuhudhijitari.
Nekudaro, nyanzvi dzakawanda dzinopikisa kuti zvichave makore - kana asiri makumi emakore - zvisati zvaitika blockchain sekufambiswa mberi kunga shandiswa kutungamira zvitupa pamwero. Saka, pane zvakare kukosha kwekudzidzisa iyo yekuzvitonga ID uye blockchain kuvanhu vose.
Uyewo Verenga: Nyanzvi Manzwi pane ramangwana reBlockchain
Kubatsira sei iko Blockchain Chitupa Management?
Pakati payo, blockchain hutsva hunotipa mukana wekutora kutonga pamusoro pekuyerera kweruzivo rwedu rwedu uye kuisa pfungwa pairi. Chero nguva yatinoisa ruzivo pawebhu, blockchain ichave nekwaniso yekuitora uye kuunganidza munzvimbo imwe. Izvi zvinoreva kuti mutengi anogona kufaira mutero pasina kuisa data muakaundi yega yega yavanoti.
Iko kushandiswa kwehunyanzvi hwakadai kunounza zvakanyanya kuwedzera zvibereko pamhepo manejimendi. Nhasi zivo yedu yemunhu inoiswa munzvimbo pamwe nematanho mazhinji anodikanwa kuti tivimbise kuzivikanwa kwedu.
Panzvimbo pokubata kwemaawa, maitiro acho anogona kudzikiswa kusvika maminetsi (zvinoreva kuti mapepa anodzikira). Kupesana nekudyara maawa online kuzadza mafomu mahombe, vatengi vanove nekwaniso yekungobvumidza mvumo kune yavo yepakati chengetedzo yeruzivo.
Zvakare, kune mamirioni akazara anogona kunge akagadzirawo zvitupa zvavo. Vanogona kunge vasiri ivo chavanoti ndivanaani. Birth authentications and identities checked on the blockchain yaizove yakadhindwa nguva, isingakanganwiki, uye yakavhurika kuti ionekwe nevanhu vese kuti vaone.
Uyewo Verenga: Yakachengeteka sei yeBlockchain Security
Ramangwana reBlockchain Chitupa Management
Sezvataurwa pamusoro, blockchain innovation inofambira mberi pachokwadi maererano nekuzvizivisa. Isu tinorarama munguva iyo ingangoita zvese nezvekuzivikanwa kwedu zvinogona kuwanikwa pane Indaneti. Ruzivo rwedu rwepamhepo rutsoka rwakafara, kubatanidza zvese zvidiki nezvedu kubva kuzita redu, zera, nzvimbo, nhoroondo yebasa, nhoroondo yezvemari, uye marekodhi emagariro.
Masangano mazhinji, vanogadzira, uye philanthropic manejimendi vari kubhuroka pamusoro pepfungwa iyi ye "blockchain identity management". Panewo huwandu hwakakosha vari kufunga nezvehurongwa hwemari huripo hune chekuita nekuendesa kune zvakajairika zvakaunganidzwa zvemari yakatorwa kubva mukuchinjana kwekutengesa kwevanhu. Iyo inoshamisa nzira yekusiyanisa iyi nerubatsiro rwe blockchain kuburikidza ne transparency system. Izvi zvinogona kufumura kutyorwa kwakawanda kuburikidza nekutarisa mari yeveruzhinji. Rekodhi yakaparadzirwa inogona kuratidza kuti matura ekutengeserana ekutengesa ari kuenda nekuapedza nekumisa kushandiswa kwemasangano emabhangi ega nemutengo.
Yese snippet yedata inosangana kumusoro kuvaka yedu yepamhepo nhoroondo. Maitiro ezvinhu acho, isu hatine pesvedzero panzira yekuti ruzivo rwedu runoshandiswa sei muchiedza chekuti haina kuvhurika kwatiri. Hatigone kuona kuti ndiani anosvika pane ruzivo rwedu asingataure mashandisiro anoita data redu.
Panguva ino tiri muchinzvimbo umo vanodzora dhata vari padanho rakakura risinganzwisisike uye vanobvumidzwa kupa ruzivo rwedu kumasangano echitatu bato (ichangoburwa Facebook kesi iri pamberi kune wese munhu). Saizvozvowo, isu tiri munzvimbo isina simba zvakare zvine chekuita nechitsotsi, nekuti isu tisingakwanise kuona kwatinoshandiswa neruzivo rwedu kudzamara yave poindi yekusa dzoka.
Blockchain tekinoroji inotipa simba rekutarisa panoshandiswa ruzivo rwedu kuitira kana mumwe munhu achinyengera kushandisa data redu tinokwanisa kupindura. Rumwe nerumwe ruzivo rwedu ruchaiswa munzvimbo yepakati ichipa nhoroondo yekutamisa kuti ibatsire kusiyanisa kushandiswa kusingatenderwe.
Chaizvoizvo, kushandisa blockchain seyakavanzika manejimendi system inoita kuti mutengi atore kudzora kwavo ruzivo. Nekutevera uye kudzora kuti data ravo rakagovaniswa sei, vagari vanogona kutora uye kusarudza wavanofunga kupa data ravo.
Uyewo Verenga: Sei Blockchain inowana nzira yayo muData Analytics
Kutevera masevhisi zvakajairika kukura ne blockchain tekinoroji:
Kuva nekwanisi yekusangana nekuvanzika kwepasirese kana zvitupa zvinotarisirwa
Kuderedza kana kuendesa nematanho ekudzokorora ekutevedzera
Zvirinani kumagumo mushandisi ruzivo
Kunyange paine kusava nechokwadi, manejimendi manejimendi ndiyo imwe yeakanyanya kushandisa masheya eiyo blockchain hunyanzvi. Izvi, asi zvichiri mune yakasarudzika danho rekutanga. Izvo hazvireve kuti haina kukosha uye haife yakamboona iyo aurora. Pachine nguva uye isati yanyatsokura zvakanyanya, zvakanyanya zvinofanirwa kuitwa kuti utarisire iyi nyaya yedhijitari nyaya, yakawanda-bhiriyoni-dhora nyaya pasirese.
Unoda chirongwa paBlockchain chakaitwa? Wobva watambanudzira kwatiri kubvunza.
Bambee- Iyo 360 Degree HRM Platform: Iyo Yemberi Yekutora
Jul 7 | zvigadzirwa zvetekinoroji